२०२२ मा तपाईले नि: शुल्क अनलाइन एसईओ कहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ? - Print Peppermint
मार्च 16, 2022 | मार्केटिङ, स्वरोजगार, एसईओ
वेब ब्रान्ड विकास गर्ने कुरा आउँदा SEO राजा रहन्छ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरूले तपाईंलाई ट्राफिक र अधिक बिक्री प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईले सधैं आफ्नो SEO कौशल निर्माण गर्न हजारौं डलर खर्च गर्नुपर्दैन। २०२२ मा नि:शुल्क SEO सिक्न मद्दत गर्ने केही सुझावहरू यहाँ छन्।
को लागी फाइदाजनक छ २०२२ मा एसईओ अनलाइन सिक्नुहोस् एक फोरम मा। यो एक उत्कृष्ट सुरुवात स्थान हो किनभने तपाईंले समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जो एउटै डुङ्गामा हुन सक्छन्। तपाईलाई बाहिरी मानिस आउँदै गरेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्न किनभने तपाईसँग विज्ञहरूका लागि शुरुआतीहरू छन् जसले उनीहरूको सल्लाह र अनुभव साझा गर्छन्।
जानकारी गुगल गर्दा र धेरै परिणामहरू प्राप्त गर्दा तपाईले SEO वा खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन फोरममा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्लेटफर्मको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा सामुदायिक वातावरण हो। तपाइँसँग तपाइँको साइटलाई कसरी अनुकूलन गर्ने भन्ने बारे तपाइँको अनौठो परिप्रेक्ष्य दिनको लागि जीवनको विभिन्न क्षेत्रहरू छन्।
साथै, तपाईं प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, र मानिसहरूले तपाईंलाई साँच्चै मद्दत गर्छन् र तपाईंको ज्ञानलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनहरू वा लिङ्कहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईंलाई चीजहरू स्ट्रिमलाइन गर्न र तपाईंका लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न मद्दत गर्न यो उपकरण हेर्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो साइटमा बिक्री बढाउन र गुणस्तरीय ज्ञान फैलाउन मद्दत गर्न सम्बद्धहरूसँग काम गरिरहेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क ईकोर्स
अर्को नि: शुल्क अनलाइन उपकरण तपाईलाई SEO मा थप आधार प्राप्त गर्न मद्दत गर्न एक eCourse हो। फोरममा गएपछि, तपाइँ यसलाई सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ र फ्रीबी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँलाई तपाइँको दायरा विस्तार गर्न मद्दतको लागि यो eCourse को लागी एक परीक्षण लिङ्क हुन सक्छ।
अनलाइन कोर्स लिने बारे ठूलो कुरा यो हो कि तपाईं यसलाई आफ्नो गतिमा गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईंसँग 30 मिनेट छ, तपाईं एक अध्याय मार्फत जान सक्नुहुन्छ। मानिसहरूसँग अडियो फाइलहरू, भिडियोहरू, छविहरू, र पाठ मार्फत सामग्री सिर्जना गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्।
के भइरहेको छ भनेर ध्यान दिन मद्दत गर्न यी तत्वहरूको संयोजन खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाइँलाई अध्याय द्वारा अध्याय तोड्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंले पुरानो-विद्यालय तरिकाले चीजहरू सम्झन मद्दत गर्न कागजमा नोटहरू लिन सक्नुहुन्छ।
साथै, तपाइँ तपाइँको इमेलमा प्रतिलिपि पठाउन र तपाइँको कम्प्युटरमा मूल कागजात प्राप्त गर्न सबै कुरा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। केहि eCourses छोटो हुन सक्छ किनभने तिनीहरू चाहन्छन् कि तपाइँ अधिक उन्नत पाठ्यक्रम किन्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिकाले, तपाइँ तपाइँको अनलाइन खेल योजना को लागी SEO को लागी केहि प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ।
फोरममा केही सदस्यहरूसँग ठोस eCourses को बारेमा कुरा गर्नुहोस् जसले तिनीहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डहरूमा मद्दत गरेको छ।
यूट्यूब SEO को बारे मा जान्न को लागी सबै भन्दा संसाधन स्थानहरु मध्ये एक हो। तपाईंसँग अडियो, पाठ, र भिजुअलहरू छन् जुन तपाईंलाई आधारभूत अवधारणाहरू बुझ्नको लागि राम्रो तस्बिर दिन। साथै, तपाईंले अद्यावधिकहरू हेर्न च्यानलहरूको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ।
कसै-कसैसँग सामुदायिक बोर्ड छ जहाँ प्रतिक्रिया छोड्ने र उनीहरूलाई तपाईंले धेरै जसो बारे जान्न चाहनु भएको जानकारी बताउनुहोस्। भिडियो अन्तर्गत कमेन्ट बक्समा पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ। गुणस्तरीय सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले सामान्यतया तपाईंले नबुझेका केही कुराहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ र स्पष्ट गर्नुहुन्छ।
उल्लेख नगर्न, यहाँका विशेषज्ञहरूले तपाइँलाई तपाइँको एसईओ रणनीति कसरी एक चरण-दर-चरण प्रक्रियामा स्क्र्याचबाट निर्माण सुरु गर्ने भनेर देखाउन सक्छन्। जब तपाइँ देख्न र सुन्न सक्नुहुन्छ के भइरहेको छ, तपाइँ ज्ञान कायम राख्न मा अधिक कुशल हुनुहुनेछ। साथै, तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको साइट कसरी सिर्जना गर्ने, WordPress मार्फत तपाइँको SEO गर्ने, र तपाइँको बाटोमा पुग्न मद्दत गर्न अन्य चीजहरू कसरी सुरु गर्ने भन्ने उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले पछिको लागि भिडियो सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको प्लेलिस्टमा राख्नको लागि यसलाई पछि फर्काउनको लागि। साथै, तपाईं आफ्नो टिभी, स्मार्टफोन, वा ट्याब्लेटमा सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। YouTube घरमा वा यात्रा गर्दा प्रयोग गर्नको लागि सुविधाजनक बहु-प्लेटफर्म एप हो।
तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट संग अगाडि बढ्न र तपाइँको लागि एक नाम निर्माण सुरु गर्न मद्दत गर्न नि: शुल्क सामग्री को फाइदा लिनुहोस्।
सामाजिक मिडिया लाइभ फिडहरू
तपाईसँग सोशल मिडिया प्रयोग नगरी SEO हुन सक्दैन। यो दर्शक, लिङ्क निर्माण, र रचनात्मकता संग हातमा जान्छ। यस प्लेटफर्मको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू मध्ये एक जडान मूल्य हो।
तपाईं इन्स्टाग्राममा जान सक्नुहुन्छ र कसैलाई एक विशिष्ट स्थानमा घुँडा टेकेको देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो पृष्ठमा SEO को बारेमा ब्लर्ब पोस्ट गर्न सक्छन्। हुनसक्छ तिनीहरू विस्तारमा थप जानको लागि पछि आईजी लाइभ गर्दैछन्।
यो प्रभावकारीहरू, उद्यमीहरू, र डिजिटल मार्केटिङका ​​प्रशंसकहरूसम्म पुग्ने उत्कृष्ट तरिका हो।
तपाईंले विभिन्न लाइभ शृङ्खलाहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले पछ्याउने व्यक्तिले यसलाई साप्ताहिक रूपमा गर्नुहुन्छ कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई बिन्दुमा रहन मद्दत गर्दछ, र तपाइँ पछि पुन: प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ शोले तपाइँलाई प्रश्न बक्समा केहि सोध्न अनुमति दिन्छ।
यो स्तरमा उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा राम्रो लाग्छ किनभने उनीहरूले के काम गर्छन् र उनीहरूले प्रत्यक्ष दर्शकहरूसँग कसरी कुरा गर्छन् भन्ने बारे तपाईँले पर्दा पछाडिको दृश्य देख्नुहुनेछ।
तपाईंले उनीहरूले साझा गरेको कुराबाट बहुमूल्य जानकारी मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछैन, तर उनीहरूले सामग्री कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने बारे तपाईंले विचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष सर्वेक्षण छ कि मानिसहरूले अर्को बारेमा कुरा गर्न चाहन्छन्। तपाईं आफ्नो बढ्दो दर्शकहरूलाई कसरी अपील गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे केही राम्रा विचारहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग सामाजिक मिडिया पृष्ठ छ र ​​क्यामेरामा अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न रमाईलो गर्नुहुन्छ भने, लाइभ सत्र गर्दा तपाईंको मनपर्ने उद्यमीहरूबाट केही नोटहरू लिनुहोस्।
व्यक्तिगत वार्तालापको लागि तपाईंले DM मा केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको सामाजिक मिडिया पृष्ठमा कर्षण प्राप्त गर्न मद्दतको लागि तपाइँको लिङ्क पुन: पोस्ट गर्न को लागी केहि राम्रो हुन सक्छ। यसले तपाईंको आत्मविश्वास र तपाईंको पहुँच बढाउँछ।
तपाइँ तपाइँको एसईओ कौशल सेटलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न विभिन्न ब्लग साइटहरू भ्रमण गर्न बिर्सन सक्नुहुन्न। बारम्बार अद्यावधिकहरूको कारणले गर्दा ब्लगहरू गुणस्तर SEO को मेरुदण्ड हुन्। जब तपाईंसँग गुणस्तरीय सामग्रीको साथ नियमित रूपमा अद्यावधिकहरू हुन्छन्, यसले तपाईंलाई खोज इन्जिनमा थप स्थान बनाउन मद्दत गर्दछ।
जब तपाइँ ब्लगको सदस्यता लिनुहुन्छ, तपाइँ एसईओ मा सबैभन्दा हालको प्रवृतिहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईले विभिन्न लेखकहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन SEO को विभिन्न क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता छ, जस्तै अन-पेज र अफ-पेज अप्टिमाइजेसन। तिनीहरूले भविष्यमा हेर्नको लागि आफ्नो चाल र चीजहरू देखाउन सक्छन्।
सायद तपाईंले एल्गोरिदम अपडेट फेला पार्नुभयो जसले अडियो फाइलहरूमा थप मूल्य राख्छ। यदि तपाइँ स्थानीय दर्शकहरूको लागि पोडकास्ट सिर्जना गर्नुहुन्छ भने यो आदर्श हो। थप रूपमा, तपाईंले Google बाट पेनाल्टी प्राप्त गर्नबाट बच्न केही लिङ्कहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
सामग्रीको अलावा, तपाइँ साइट लेआउटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। के यसमा सफा इन्टरफेस छ? दृश्यहरू के हुन्?
सफल ब्लगरको टेम्प्लेट ट्वीक गर्ने बारे विचार गर्नुहोस् तपाईलाई उनीहरूको बल र कमजोरीहरू हेर्न मद्दत गर्न। साथै, साइट गति र नेभिगेसन मा एक नजर राख्नुहोस्। के पृष्ठहरू पहुँच गर्न सजिलो छ?
के यो एक श्रेणीबाट अर्को वर्गमा जाँदा सहज महसुस हुन्छ? तपाईंले अनुभवलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि साइटमा स्क्रोल गर्न सहज महसुस गर्नुपर्छ।
एक ब्लगरलाई तिनीहरूको ट्राफिक बढ्दै गर्दा गुणस्तरीय साइट कायम राख्न मद्दत गर्न तिनीहरूले प्रयोग गर्ने प्लगइनहरूको बारेमा गुणस्तर सुझावहरूको लागि सोध्नुहोस्।
SEO पोडकास्टहरू तपाईंलाई राम्रो सन्तुलित साइट सिर्जना गर्न मद्दत गर्नको लागि बहुमूल्य सुझावहरू प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुविधाजनक तरिकाहरू हुन्। सबै भन्दा पहिले, तपाईं पोडकास्ट सुन्न घर हुनु पर्दैन। तपाईंसँग एक प्रसिद्ध ब्लगर हुन सक्छ जुन तपाईंले साप्ताहिक रूपमा विभिन्न अडियो स्ट्रिमिङ सेवाहरूमा पोस्ट गर्नुहुन्छ।
यसले तपाइँलाई तपाइँको कारमा, कक्षाको बीचमा, वा खाजामा सुन्न अनुमति दिन्छ। तपाईंसँग घर फर्केर एक घण्टाको यात्रा हुन सक्छ, र पोडकास्ट सुन्दा एकरसता तोड्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै, तपाईंसँग मानसिक शान्ति छ किनभने यो गाडीमा तपाईं मात्र हुनुहुन्छ।
तपाईंले कोलाहल गर्ने छिमेकीहरू वा बच्चाहरूले तपाईंलाई पोडकास्ट सुन्नबाट विचलित गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। साथै, पोडकास्टहरू सुन्दा तपाईंलाई आफ्नै सिर्जना गर्ने विचारहरू दिन सक्छ। तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड मा अधिक ध्यान प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको लिखित सामग्री को पूरक को लागी एक छोटो अडियो फाइल सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ।
यदि तपाइँ खाजा खाँदै हुनुहुन्छ, हरेक दिनबाट विश्राम लिँदै हुनुहुन्छ, वा जिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले फरक पार्दैन, SEO ज्ञान बुझ्न सजिलो छ।
वेबिनारहरू सोशल मिडियामा लाइभ फिडहरू जस्तै छन् तर अधिक व्यक्तिगत महसुस गर्छन्। चाहे तपाइँ एक को लागी भुक्तान गर्नुहोस् वा नि: शुल्क वेबिनार लिनुहोस्, तपाइँले कसैको वेबसाइटमा मात्र पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यसले एउटै कोठामा समान विचारधारा भएका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ।
तपाइँ यसलाई वास्तविक समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ जब प्रस्तुतकर्ताले प्रस्तुतीकरणको बीचमा दर्शकहरूलाई प्रश्नहरू सोध्छन्। यसले उद्यमी र ग्राहक बीच थप अन्तरक्रिया सिर्जना गर्दछ। थप रूपमा, उपभोक्ताहरूले कुनै पनि चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्छन्।
हुनसक्छ वेबमास्टरसँग कमिहरू भएको उत्पादन छ। तिनीहरूले धेरै उपभोक्ताहरूले फेला पार्ने नकारात्मक पक्षहरूमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिन सक्छन्। यसले मानिसहरूलाई साइटमा राख्न मद्दत गर्नको लागि तिनीहरूको SEO रणनीतिहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ।
यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले प्रस्ताव गरेको कुराको ठूलो मूल्य छ र ट्रेन्डी रहन्छ बजार। राम्रोसँग अनुकूलित वेबिनारले अवशिष्ट ट्राफिक पनि ल्याउन सक्छ। प्रसारण समाप्त भएपछि हेराइहरू कसरी थपिन्छन् भनेर सोच्नुहोस्।
तपाईं कर्षण र बिक्री प्राप्त गर्न एक वेबिनारबाट धेरै भन्दा धेरै कसरी प्राप्त गर्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक विशेषज्ञ वेबमास्टरलाई थाहा छ कि मानिसहरूलाई उनीहरूको सिटमा टाँस्न कुन भाषा प्रयोग गर्ने। साथै, तिनीहरूले यसलाई पछि मुद्रीकरण गर्न सक्ने प्याकेजको अंश बनाउन सक्छन्।
वेबिनारहरू SEO योजनाको लागि धेरै प्रभावकारी हुन सक्छन्। तपाईंले पहिले नै आफ्नो मूल लक्ष्यमा आकर्षित गर्नुभयो, र तिनीहरू फिडमा भाग लिन र तपाईंबाट केही किन्न इच्छुक छन्। तपाईंको श्रोताको रुचि भएको विषयको बारेमा सोच्नुहोस्, भिडियो/अडियो ढाँचामा त्यो जानकारी कसरी स्थानान्तरण गर्ने, र यसलाई धेरै प्लेटफर्महरू मार्फत वितरण गर्ने।
यसले तपाइँको SEO अभियानलाई थोरै वा कुनै लागत बिना अर्को स्तरमा लैजान सक्छ। साथै, तपाईंले राम्रो गर्नुभएका चीजहरू र अर्को पटक राम्रो वेबिनार सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्ने गल्तीहरू देख्नुहुन्छ।
Quora मा प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
Quora एउटा असाधारण प्रश्न-उत्तर वेबसाइट हो जसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ विभिन्न व्यक्तिहरु संग जडान। यदि तपाईंलाई चिकित्सा प्रश्नको सम्बोधन चाहिन्छ भने, तपाईंले वर्षौंको अनुभव भएका डाक्टरहरू फेला पार्नुहुनेछ। यदि तपाइँ एसईओ को बारे मा केहि खोज्नु पर्छ भने त्यहि कुरा हुन सक्छ।
तपाईले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको अर्थ जान्न चाहानुहुन्छ। यसको जवाफ दिने मानिसहरू संसारका विभिन्न भागहरूबाट आउँछन् र तिनीहरूको ब्रान्ड हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई विश्वको तिनीहरूको क्षेत्रका मानिसहरूका लागि शब्दको अर्थ के हो भन्ने प्राविधिक पक्षहरूमा राम्रो नजर दिन्छ।
अर्को फाइदा भनेको मानिसहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु हो। तपाईंले पृष्ठहरूमा जति धेरै टिप्पणी गर्नुहुन्छ, त्यति नै बढी ट्राफिक तपाईंले आफ्नो प्रोफाइलमा पाउनुहुनेछ। तपाइँ यसलाई तपाइँको ब्रान्डमा ट्राफिक निर्माण गर्न भरपर्दो विधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रोफाइलमा आफ्नो नाम, शैक्षिक पृष्ठभूमि र व्यवसाय राख्नुहोस्। जब तपाईं समुदायमा सक्रिय हुन थाल्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई थप हेराइहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईले जति धेरै मूल्य प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो साइटलाई ठूलो दर्शकहरूमा प्रवर्द्धन गर्न सक्ने राम्रो मौका। तर, जनतालाई केही न केही दिनैपर्छ ।
गुणस्तर जानकारीको साथ केही पोष्टहरू बनाउनुहोस् र तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटमा सान्दर्भिक लिङ्क घुसाउनुहोस्। यो सफा देखिन्छ, र मानिसहरूले तपाइँका पोस्टहरूमा टिप्पणी र समर्थन गर्न सक्छन्। यसले तपाइँको अनुसरणलाई बढावा दिनेछ, र तपाइँ गर्नुहुनेछ थप ध्यान दिनुहोस् फोरममा।
एक संरक्षक पाउनुहोस्
एक सल्लाहकार पाउन नडराउनुहोस्। कतिपयले आफ्नो प्रस्ताव पनि गर्छन् सेवाहरू नि: शुल्कको लागि किनभने तिनीहरू तपाईंलाई सफल हुन चाहन्छन्। तपाईंसँग सम्भाव्यता हुन सक्छ, र एक सल्लाहकारले देख्छ कि तपाईंलाई अर्को स्तरमा पुग्न मद्दत गर्नको लागि त्यो अतिरिक्त धक्का आवश्यक छ।
तिनीहरूसँग एक हप्ता-लामो मेन्टरशिप प्रोग्राम हुन सक्छ जसले तपाईंलाई पाठ्यक्रम लिन अनुमति दिन्छ, र तिनीहरूले प्रत्येक दिन 30 मिनेट खर्च गर्न सक्छन् स्काइप वार्तालापको माध्यमबाट तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न। तपाइँ SEO को बारेमा आधारभूत प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको ब्रान्डको साथ यी रणनीतिहरू लागू गर्ने बारे राम्रो विचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, एक सल्लाहकारले तपाईंलाई यसमा रहन प्रोत्साहन दिन्छ।
तिनीहरूले तपाईंको बल र कमजोरीहरू देख्न सक्छन् र तपाईंलाई प्रगति गर्नबाट रोक्न सक्ने कुनै पनि खाली ठाउँहरू भर्न मद्दत गर्न सक्छन्। उल्लेख नगर्न, तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो मिशनमा आधारित राख्न मद्दतको लागि तिनीहरूका गल्तीहरूको बारेमा थाहा दिन सक्छन्।
जबकि तपाईंले केही पाठ्यक्रमहरूको लागि उन्नत प्रविधिहरू सिक्नको लागि तिर्नु पर्छ खोज इन्जिन अनुकूलन, तपाइँलाई सुरु गर्न मद्दत गर्न धेरै नि: शुल्क उपकरणहरू छन्। डिजिटल मार्केटिङ को यस रूप मा आफ्नो खुट्टा भिजेको लागि आफ्नो स्रोतहरु प्रयोग गर्नुहोस्।
← द डिभाइडिङ फ्याक्टर: ओलिभिया क्वाक डेकानीबाट आर्ट वर्ल्ड इनसाइट्स
तपाईंको श्रोतालाई चकित पार्ने डिजिटल प्रिन्टहरू सिर्जना गर्दै →
तपाईंले नेदरल्याण्ड्सबाट भ्रमण गरिरहनुभएको हामीले याद गर्यौं। हामीले तपाईंको किनमेल सुविधाको लागि हाम्रो मूल्यहरू यूरोमा अद्यावधिक गरेका छौं। यसको सट्टा संयुक्त राज्य (अमेरिकी) डलर को उपयोग गर्नुहोस्। खारेज